Pep Guardiola oo ka hadlay ololaha xoogan suuqa xagaaga ee kooxda Liverpool - Wargane News
Home Sports Pep Guardiola oo ka hadlay ololaha xoogan suuqa xagaaga ee kooxda Liverpool
Pep Guardiola ayaa sheegay inuu fahamsan yahay sumcada ay Liverpool ku leedahay suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda, kadib markii ay Sky Blues qaab layaab leh ee rikoodh ah ah ay ku qaaday horyaalka Premier League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Kooxda Jürgen Klopp ayaa ku bixsay aduun dhan £ 250m saxiixyo cusub ee kooxda qeyb kasoo noqday, taasoo kasoo horjeeda hadalo uu xili hore Jürgen Klopp ku wareeraray lacagaha faraha badan ee lagu bixinayo suuqa ciyaartoyda.
Laakiin Guardiola ayaa kahor kulanka saaxiibtinimo ay la ciyaari doonaan kooxda Liverpool wuxuu ka hadlay dhaq dhaqaaqa suuqa ee Reds.
“Koox kasta waxay sameyneysaa waxa ay aaminsan tahay, waxaad u fahamsantahay lacagta si fiican”.
“Ma xiiseenayo wax ay dadka xili hore sheegeen, Liverpool waxay la ahayd inay sameyso saxiixyadan, waxayna ku bixisay lacagahan, sidaas darteed ma xukumi doono waxa ay sameynayaan”.
“Hadii ay go’aansadaan, waa wax u fiican iyaga, ma jecli marka ay saaxiibaday iga hadlayaan”.
“Waxaan sameenay waxa aan ku xoojin karno awoodeena Premier League, tani waxay la micno tahay in kuwo kale ay doonayaan inay sameeyaan wax ka sii fiican, Liverpool marwalba waa koox taariikhi ah ee tartameysa, waxaan isku arki doonaa gudaha garoonka”.
Somaliland: Wasiir Ku Xigeenkii Hore Ee Shaqadda Iyo Arimaha Bulshada Somalland Oo Ka Hadlay Kormeer Ay Ku Marayaan Gobolada Dalka
Frank Lampard Oo U Caleemo Saaray N’Golo Kante Xiddiga Khadka Dhexe Ee Dunida Ugu Fiican